Nzọụkwụ 20 iji wuo obodo site na ọkọ - Geofumadas
Julaị, 2015 Land Management
Nke a bụ a mkpoko item Fans nke Urban Development na Land Management, na ngafe ise siga na smart obodo na anya dị ka a cliché atụ nụrụ ụtọ nsogbu ihe zụlitere na 20 mfe nzọụkwụ, ihe ịma aka nke ha na-ịkụ nzọ mba dịka Egypt na Equatorial Guinea na ịpịghachi isi ha.
Akwụkwọ m na-ezo aka, nke m na-agbakwunye njikọ na njedebe nke isiokwu ahụ, bụ nyocha nke edemede na Bekee. Ọ naghị eme onwe ya ka ọ bụrụ atụmatụ ịgbaso, kama ọ na-enye ohere ịmara ụfọdụ mgbanwe ndị dị ugbu a na ọrụ owuwu nke obodo ọhụrụ n'akụkọ ihe mere eme, omume ndị a rụrụ na obodo ndị dị ugbu a nke a na-egosipụta ma na-e imomi na atụmatụ ọhụrụ ahụ. na nke bụ ihe ndị e kwesịrị inyekwu mkpa, n’etiti ihe ndị ọzọ.
M na-achikota nzọụkwụ iri abụọ ahụ:
1: Họrọ ebe
2: Kwado mmiri mmiri
3: Gbaa mbọ hụ na ego dị
Ka obodo wee nwee mmezi ego, ọ chọrọ ọrụ. N'echiche a, ọhụrụ isi obodo nke Egypt ọnọde mma ohere n'ihi na gọọmenti na ya ga-akpali ndị ọhụrụ obodo, dị ka Herbert Girardet, edemede nke "Building adigide obodo".
Ọnọdụ a esesịn mere na obodo ndị ọzọ na e mere site ọkọ ka Brasília (Brazil), Canberra (Australia), Abuja (Nigeria), Ottawa (Canada) na New Delhi (India), e dị ka isi obodo ọhụrụ, na-eweta "Ohere ohere na ohere akụ na ụba nke ịbụ onye na-elekọta mba".
5: Esoola ndị bi na ya agha
6: Mepụta usoro atụmatụ
7: Jikọta njem
8: Chee echiche banyere mmachibido iwu
9: Mee ka ọ dị mma
10: Mee ka njikọtawanye
11: Na-achọ ka ịbụ carbon neutral
12: Malite ọzọ, i chefuru ogige ntụrụndụ
13: ... na omenala
14: Biko, ọ bụghị agwaetiti ọzọ n'ụzọ dị mma
Ihe ize ndụ nke obodo na-agba site na ọkọlọtọ bụ na ha anaghị enye ndị chọrọ ibi n'ime ha otu ọrụ, ụlọ ma ọ bụ njem njem.
Ọbụna onye ọkà mmụta banyere ihe gbasara ọrịa na Mahadum Oxford, Nick Simcik Arese, na-ekwu na ụdị obodo a na-emesị ghọọ onye apartheid nke klaasị, n'ihi na enweghi nhọrọ maka ndị nwere akụ na ụba akụ na ụba.
Ọ bụ n'ihi nke a ka e kwesịrị ilekwasị obodo anya na akụkụ ndị ọzọ transcendental, dị ka ịbụ ndị dị iche iche n'etiti ọha na eze.
15: Mee nkwupụta
16: Na-emeso ndị ọrụ ùgwù
17: Mee ngwa ngwa, obughi ngwa ngwa ...
18: Ọhụụ obodo maka ụmụ amaala ọhụrụ
19: Ọ bụrụ na ị na-ewu ya, ha ga-abịa
20: Nye ya aha
Ọ bụ ezie na ọ na-ada ihe ezi uche, ọ na-adịghị ihe na-n'uche maka n'agbanyeghị ihe mere na isi obodo ọhụrụ nke Egypt, nke na ọnwa anọ nke ya mara ọkwa, ma na-aha.
Ana m atụ aro ilele anya edemede mbụ, ma ọ bụ mbipute ahụ mbụ na Bekee.
Previous Post«Previous N'ike mmụọ nsọ - ndkpụrụ nke teknụzụ GIS - ESRI UC ụbọchị mbụ
Next Post Gbanwee ohere gbasara data n'ịntanetị!Next »
2 Azaghachi "Nzọụkwụ 20 iji wuo obodo site na ncha"
Ịnwere ike ịgbakwunye nke ahụ kpọmkwem na Google Earth, nkewapụrụ site na njirimara ma gosipụta mpaghara UTM.
BRUNO CARRASCO kwuru, sị:
M ka na-aghọtaghi nke ọma, ma achọrọ m inye ihe atụ. M nwere data na GPS na X = 534787, Y = 9747800 dị ka ndị a ndịna na google obi, ma tinye ogo, nkeji, nke abụọ ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na m nwere na degrees, nkeji, sekọnd ka m nwere ike converted n'ime X, Ekele